महानायक विवादमा नम्रताको प्रश्न ‘किन हो मै ठूलो भन्ने घमण्ड’ ? – List Khabar
Home / मनोरंजन / महानायक विवादमा नम्रताको प्रश्न ‘किन हो मै ठूलो भन्ने घमण्ड’ ?
admin October 8, 2021 मनोरंजन Leaveacomment 49 Views
उनले नामै लिएर फेसबुकमा नाम नलेखेपनि उनको अभिव्यक्ति कोतर्फ लक्षित छ भन्ने कुरा बुझ्न कठिन छैन । फिल्म क्षेत्रमा कसैले कसैलाई नबनाएको टिप्पणी गर्दै मनपरी बोल्न छूट समेत नभएको उल्लेख गरेकी छिन् ।
‘अझै कति हामी हाँसोको पात्र बन्ने’ उनले प्रश्न गरेकी छिन् । सबैजना मिडिया पर्सनालिटी परिवार, फिल्म क्षेत्र र दर्शकको कारणले भएको नबिर्सन पनि उनले आग्रह गरेकी छिन् ।
Previous दुधसँग खान नहुने १२ खानेकुराहरु जसका बारेमा थाहा नपाएर हामी बिरामी हुन्छौ
Next प्रचण्डको सान्दर्भिकता सकियो, प्रेसरको औषधि दिने कि किसुनजीजस्तै आश्रम पठाउने होः महेश बस्नेत